Zoma 10 Septambra 2021 – FJKM
ASAN’NY APOSTOLY 10.44-48
1-Nilatsaka tamin’izay rehetra nandre ny teny
« Raha mbola nilaza izany teny izany i Petera dia nilatsaka tamin’izay rehetra nandre ny Fanahy Masina » (and44) .Zava-dehibe ny fifantohana , fihainoana , fihainoana ary fandraisana ny Tenin’Andriamanitra . Voalaza eto fa izany dia loharano niteraka ny ony izay nahafahan’ireo izay nihaino nilatsahan’ny Fanahy masina . Izany dia ankoatra ireo fomba hafa efa fantantsika handraisana fahasoavana hisitrahana ny Fanahy Masina toy ny fametrahan-tànana , fangatahana amin’ny Tompo , ny vavaka ary indrindra fa ny fandraisana an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy.
2-Tsy mijery tavan’olona
« Ary talanjona ny mino isan’ny voafora izay niaraka tamin’i Petera satria nilatsaka tamin’ny Jentilisa koa ny fanomezana dia ny Fanahy Masina » (and45). Ny Fanahy Masina dia tahaka ny persona izay miteny , mibaiko : »hoy ny Fanahy Masina » (and19), any amin’nys ehatra hafa dia manana fihetsehampo ny Fanahy Masina . « Aza mampalahelo ny Fanahy Masin’ Andriamanitra « (Efes 4.30), ary eto dia toy ny manana fanapahan-kevitra ny Fanahy Masina ka nisafidy tsy hijery tavan’olona ka nilatsaka tamin’ny Jentilisa ireny ilay « ondry hafa » izay tian’i Jesoa ho ao am-bala ihany koa.
3-Tsy afa-misaraka amin’ny fandraisana Sakramenta
Indraindray dia ny batisa no lasa alohan’ny fandraisana ny Fanahy Masina (Asa 8.17). Indraindray miaraka amin’ny fotoana iray izany ary eto dia ny batisa no aloha . Ny iombonan’ireo dia mifampiankina sy mifampitohy ireo .
Lazao izay azonao ambara fohy momba nyFanahy Masina .